M1 ဟာ Apple ဆီလီကွန်ခေတ် Mac အတွက်ပထမဆုံး Processor ဖြစ်ပါတယ် ငါက Mac ပါ
Apple ပွဲတော်သည်နိဂုံးချုပ်အပြီးနောက်တစ်ခု»ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပီတိအံ့သြသွားတယ်။ ယခင် iPhone 12 တင်ဆက်မှု၏အဓိကသော့ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်သိထားပြီးဖြစ်သောအရာအားလုံးကိုအတည်ပြုခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ထိုအံ့သြစရာများမှာစာလုံးအကြီးများသာရှိသည်။ သို့သော်သူတို့ကသူတို့ပြောမည့်အကြောင်းကိုအကြမ်းဖျင်းသိထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံးဝမသိသောပရိုဆက်ဆာအသစ် (A14X အကြောင်းမေ့လိုက်ပါ) နှင့် Apple Silicon ခေတ်၏ Mac အသစ်သုံးခုနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောစွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့်စျေးနှုန်းများမတက်ဘဲယူရိုသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းမတက်ဘဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတစ်ခါမှမရခဲ့ဖူးပါ။ ) နှင့်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်ကနေရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကွန်ပျူတာ၏သမိုင်းကြောင်းသည်အက်ပဲကွန်ပျူတာများ၏လမ်းကြောင်းနှင့်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သူတို့ပြောတာတွေကိုကြည့်ရအောင် အသစ်အညိုရောင်သားရဲ M1.
Apple Silicon ခေတ်သစ်၏ပထမဆုံး Mac များသည် iPhone 12 ၏ processor ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့် iPad Air သည် A14X ကွန်ပျူတာများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးယုံကြည်ကြသည်။ တင်ပြချက်မှာပထမဆုံးမြင်ရတာက "M1" လို့ခေါ်တဲ့ပရိုဆက်ဆာအသစ်တစ်ခုပါ။ ကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ် Mac များကိုရွေ့လျားရန်တာ ၀ န်ယူမည့် M စီးရီး၏ပထမဆုံး။ လက်ရှိ Intel ချစ်ပ်များထိခိုက်နစ်နာစေရန် ARM နည်းပညာနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းအား Apple ၏ကွန်ပျူတာကမ်းလှမ်းမှုမှတဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ အက်ပဲလ်ဆီလီကွန်ခေတ်စတင်ခဲ့သည်။
1 M1 နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
3 တစ် ဦး ကအလွန်အစွမ်းထက်ဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်
5 M1 ရှိသီးသန့်နည်းပညာအသစ်များ
6 Big Sur သည် M1 ကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
M1 သည်ပထမဆုံး M-series ပရိုဆက်ဆာဖြစ်သည်, ၅ နာနိုမီတာနည်းပညာဖြင့်မှတ်သားထားသော ARM ဗိသုကာနှင့်အတူ Apple အတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစားသုံးမှုအချိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံးသောနှုန်းသည်
CPU ရှိတယ် ၈ ခု စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Core လေးခုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Core လေးခုပါဝင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Core တစ်ခုစီသည် single-threaded task များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
သူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြန်ဆုံး CPU Core များဖြစ်သည် စွမ်းအင်နိမ့်ချစ်ပ်များပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံဆရာများအနေဖြင့်မြင့်မားသောဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့်တည်းဖြတ်နိုင်စေရန်နှင့် developer များကအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုယခင်ကထက်သုံးဆပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖန်တီးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအပြောင်းအလဲကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလိုအပ်လျှင် ၄ ခုလုံးကိုအတူတကွသုံးနိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Core လေးခုသည်ယခင်ပရိုဆက်ဆာများတွင်လိုအပ်သောစွမ်းအင်၏ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံတွင်ထူးကဲသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်၊ ဒီ Core လေးခုဟာစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပြီးလက်ရှိမျိုးဆက် dual-core macBook Air နဲ့အလားတူစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည်အလင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးခြင်း (သို့) ဝဘ်ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောနေ့စဉ်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအထူးနည်းလမ်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လိုအပ်ပါက Core ရှစ်ခုလုံးသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးလိုအပ်သည့်အလုပ်များအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကွန်ပျူတာစွမ်းအားကိုပေးနိုင်သည် watt per world CPU စွမ်းဆောင်ရည်.
ရလဒ်အနေနှင့် M1 ပရိုဆက်ဆာအသစ်သည် CPU ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည် 3,5 ကြိမ် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ၆ ဆပိုမိုမြန်ဆန်သော GPU စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ၁၅ ဆပိုမိုမြန်ဆန်သောသင်ကြားမှုများနှင့်ယခင်ပရိုဆက်ဆာနှင့် Mac စက်များထက် ၂ ဆပိုကြာရှည်ခံသည့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။
တစ် ဦး ကအလွန်အစွမ်းထက်ဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်
M1 မှာ Apple ရဲ့အဆင့်မြင့် GPU ပါ ၀ င်တယ်။ နေ့စဉ်အသုံးချမှုများနှင့်လေးလံသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်များအပါအဝင် Mac application များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းမှသင်အကျိုးခံစားရမည်။ ၎င်းတွင်စွမ်းအားမြင့် Core ရှစ်ခုအထိရှိပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် Thread ၂၅၀၀၀ နီးပါးကိုစီမံနိုင်သည်။
GPU သည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်၊ 4K ဗီဒီယိုစီးဆင်းမှုများကိုချောမွေ့စွာကစားခြင်းမှသည်ရှုပ်ထွေးသော 3D မြင်ကွင်းများကိုပြသနိုင်သည်။ နှင့်အတူ စွမ်းဆောင်ရည်၏ 2,6 teraflopsM1 သည်ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးဂရပ်ဖစ်ဖြစ်သည်။
M1 ပရိုဆက်ဆာသည်သယ်ဆောင်သည် အာရုံကြောမော်တာ အက်ပလီကေးရှင်းမှမက်ဆီအထိစက်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်။ တစ်စက္ကန့်တွင် ၁၁ ထရီလီယံလည်ပတ်နိုင်သည့်အက်ပဲလ်၏အဆင့်မြင့် 16-core ဗိသုကာနှင့်အတူ M11 ရှိ Neural Engine သည်စက်သင်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ၁၅ ဆပိုမိုမြန်စေသည်။ အမှန်တကယ်တွင် M1 ချစ်ပ်တစ်ခုလုံးသည်စက်သင်ကြားမှုတွင်ထူးကဲစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ CP accelerator တွင် ML accelerators နှင့်စွမ်းအားပြည့် GPU တို့ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းတွင်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောအဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလိမ့်မည် ။
ဆူညံသံလျှော့ချခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကွာအဝေးနှင့်အလိုအလျောက်အဖြူချိန်ခွင်လျှာကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုများအတွက် Apple ၏နောက်ဆုံးပေါ် Image Signal Processor (ISP) ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးသောအတန်းအစားလုံခြုံရေးအတွက်အဆုံးစွန်လုံခြုံသော Enclave ။
ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုလုံခြုံသော SSD စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် AES encryption hardware ဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောသိုလှောင်မှု Controller ။
Apple ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော Thunderbolt USB4ကိုထောက်ပံ့သောအမြန်နှုန်းနှင့်လွှဲပြောင်းနှုန်းသည် 40 Gbps အထိရှိပြီးအရံပစ္စည်းများကိုယခင်ကထက်ပိုမိုထောက်ပံ့သည်။
Big Sur သည် M1 ကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
Symbosis M1 နှင့် MacOS Big Sur တို့ကို Apple Silicon ဟုခေါ်သည်
Big Sur နှင့် M1 နှင့်အတူ Mac အသုံးပြုသူများသည်ယခင်ကထက်များပြားသော application များကို run နိုင်သည်။ Apple Mac ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့် M1 စနစ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ M1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသေးသောလက်ရှိ Mac application များသည် Apple ၏ Rosetta2နည်းပညာကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။ iPhone နှင့် iPad အက်ပလီကေးရှင်းများကို Apple Silicon Mac ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » M1 ဟာ Apple ဆီလီကွန်ခေတ် Mac အတွက်ပထမဆုံး Processor